Shanduko Yebhasikoro Yokupaka
Shanduko Yebhasikoro Yokupaka Iyo Smartstadors-Cyclepark inzvimbo dzinoenderana-siyana, dzakagadzirirwa kurongedza bhasikoro mabhasikoro maviri ayo anokodzera mumaminitsi kugonesa nekukurumidza kusimudzira kwenzvimbo dzekupaka mabhasiketi munzvimbo dzese dzemadhorobha pasina kuwedzera zvinowonekera munharaunda yemugwagwa. Midziyo iyi inobatsira kudzikisa kuba bhasikoro uye inogona kuiswa mumigwagwa kunyange yakatetepa, kusunungura kukosha kutsva kubva kune huripo. Yakagadzirwa nesimbi isingaiti michina inogona kuve RAL ruvara inofananidzwa uye yakadzvanywa kune Vemahara Masimba kana vatsigiri. Inogona zvakare kushandiswa kubatsira kuona nzira dzeCycle. Iyo inogona kugadziriswazve kuti ikwane chero saizi kana chimiro chekolamu.
Chipiri 17 Chivabvu 2022
Bhodhoro Rewaini Zino rinogadzira iro grafiki kuzivikanwa kweuteresi Gabriel Meffre iyo inopemberera makore makumi masere. Isu takashanda pane hunhu hwekugadzira hwemakumi matatu yenguva, yaifananidzirwa zvakajeka nemukadzi ane girazi rewaini. Iwo mahwendefa emavara anoshandiswa anozivikanwa nekumhanyisa uye anopisa foil stamping kuti asheedzere chikamu chemuteresi.
Svondo 15 Chivabvu 2022
Kupakirwa Chinetso chekuzikanwa kwema chip pack emhando yeBBBG chaive mukuita mutsara wekutakura mukukwana pamwe nerechisikwa chechiratidzo. Mapakeji acho aifanira kunge ari maviri minimalist uye echizvino, nepo akabata hunyanzvi hwekubata kwematumbu uye iro rinonakidza uye nerinonzwisa tsitsi iro rinounza mavara akakwezvwa nepeni. Iyo aperitif inguva yekuratidza iyo inofanirwa kunzwa pane yekurongedza.
Mugovera 14 Chivabvu 2022
Masitepisi U Matanho masitepisi anoumbwa nekubatanidza maviri u-akaumbwa mraba bhokisi profil zvidimbu ane akasiyana masisitimu. Nenzira iyi, masitepisi anozozvitsigira oga kana zviyero zvacho zvisingapfuuri chikumbaridzo. Mukufanogadzirira kugadzirira kwezvimedu izvi zvinopa kugungano nyore. Kutakura nekufambisa zvezvimedu izvi zvakaringana zvakare zvakarerudzwa zvikuru.
Chishanu 13 Chivabvu 2022
Masitepisi UVine spiral masitepisi anoumbwa nekudyidzana U uye V yakavezwa bhokisi profiles mune imwe alternating fashoni. Nenzira iyi, masitepisi anozozvitsigira ega sezvo isingade rutsigiro rwepakati kana perimeter. Kuburikidza neyakajairika uye inowanisa maitiro, dhizaini yacho inounza kuve nyore mukugadzira, kutakura, kutakura nekuisa.
Chitatu 11 Chivabvu 2022
Shanduko Yebhasikoro Yokupaka Masaesi E-Magnesium Bhodhoro Rewaini Kupakirwa Masitepisi Masitepisi